जानिराख्नु हाेस् साङ्ला मा-र्ने यी घरेलु उपायहरु ! - Info Nepal
INFONPLस्वास्थ्य र जीवनशैलीजानिराख्नु हाेस् साङ्ला मा-र्ने यी घरेलु उपायहरु !
जानिराख्नु हाेस् साङ्ला मा-र्ने यी घरेलु उपायहरु ! गर्मी मौसम छ, तपाईको भान्साकोठा, वा घरमा सा-ङ्ला हुनुपर्छ । यो मौसममा घरमा, खासगरी भान्सामा साङ्लाको उपस्थिति बाक्लो हुन्छ । साङ्लाका कारण खानेकुराहरु दु-षित हुन्छ । घरमा जथाभावी फोहोर बनाउँछ ।
साङ्लाले विद्युतिय उपकरणमा समेत समस्या उत्पन्न गराउँछ । बजारमा पाइने वि-षादीको प्रयोगले केही दिन साङ्ला भागे पनि त्यसले स्वास्थ्यमा असर गर्छ । तर केही यस्ता घरेलु उपाय छन् जसबाट सहजै छुटकार पाउन सकिन्छ । यस्ता छन् घरेलु उपायहरु:-
१) अण्डाको बोक्रो:- अण्डाको बोक्रोको प्रयोगले पनि तपाइले साङ्लालाई धपाउन सक्नुहुन्छ । प्राय घरमा अण्डा प्रयोग भइरहन्छ । तर, अण्डाको बोक्रा यत्तिकै फ्याकिन्छ, यदि यसको सही प्रयोग गर्नुभयो भने साङ्ला धपाउन सकिन्छ । अण्डाको बोक्रा कुनै कुनामा राखेमा त्यसबाट आउने स्मेलले पनि साङ्ला बाहिर निस्किने र भाग्ने गर्छन् । त्यस्तै, लसुन, प्याज र मरिचलाई बराबर मिलाएर पिस्नुपर्छ ।
उक्त पेस्टलाई पानीमा मिसाएर घोल तयार गर्ने । अब त्यो घोललाई एउटा बोत्तलमा राखेर साङला बस्ने कुना काप्चामा छर्कनुपर्छ । केहि समय नियमित घोल छर्केपछि साङ्लाको समस्याबाट राहत मिल्छ । पानीमा डिटर्जेन्ट घोलेर साबुनको घोल बनाउने । यसका लागि कुनैपनि किसिमको साबुन प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस घोललाई स्प्रेको माध्यामबाट साङ्ला बस्ने ठाँउमा छर्कनुपर्छ ।
२) मट्टितेलको प्रयोग:- मट्टीतेलको प्रयोगले पनि साङ्ला भाग्ने गर्छन् । जहा बढी मात्रामा साङ्ला हुन्छन्, त्यस ठाउँमा मट्टीतेल छर्किनुभयो भने त्यसको गन्धले साङ्ला भाग्छन र मर्छन् पनि ।
३) तेजपत्ताको प्रयोग:- तेजपत्ताको बास्नाले साङ्ला भाग्ने गर्छन् । घरको जुन ठाउँमा बढी मात्रामा साङ्ला देखिन्छन्, त्यही ठाउँमा तेजपत्ताको धुलो राख्ने गरेमा यसको बास्नाले साङ्ला भाग्ने गर्छन् ।
४) ल्वाङ:- ल्वाङको गन्धले पनि साङ्ला भगाउन मद्दत गर्छ । ल्वाङको गन्धका कारण साङ्ला तुरुन्तै भाग्ने गर्छ । ५) रेड वाइन:- भान्सा घरमा भएका साङ्ला भगाउनको लागि एउटा कचौरामा थोरै रेड वाइन राख्नुस् । यसको बास्नाले लुकेका साङ्लाहरु बाहिर निस्किनुका साथै भाग्ने र म- र्ने गर्छन् ।
६) बेकिङ पाउडर र चिनी:- यसको प्रयोगले पनि साङ्ला भाग्ने गर्छन् । एक कचौरामा धुलो पारिएको चिनी र बेकिङ पाउडरलाई बराबर मिलाएर साङ्ला आउने ठाउँमा राख्नुहोस् । चिनीको स्वादका कारण साङ्लाले त्यो धुलो खान्छ र बेकिङ पाउडरको गन्धले साङ्ला म- र्ने गर्छन् ।
७) बोरेक्स पाउडरको प्रयोग:- साङ्ला बढी आउने ठाउँमा बोरेक्स पाउडर छर्नाले पनि साङ्ला चाँडै भाग्ने गर्छ । तर यो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भएको हुँदा बालबच्चालाई टाढै राखेर यसको प्रयोग गर्नु उत्तम मानिन्छ ।
प्याजको प्रयोगले तीन मिनेटमै निको पार्छ दाँतको दु`खाई, यसरी गर्नुहाेस् प्रयाेग